Wednesday December 12, 2018 - 12:21:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Faransiiska ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay dhinteen 12 kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii weerar hubeysan lagu qaaday magaalada Strasbourg ee dhacda bariga wadanka Faransiiska.
Saraakiisha booliska ayaa sheegay in ruux hubeysan uu toogasho ka geystay suuq lagu iibiyo alaabaha ay dadka gaalada ugu dabaal degaan waxa loogu yeero Ciidda Kirismiska.
Ruuxa toogashada geystay ayaa la sheegay in uu caan ka dhax ahaa laamaha ammaanka iyadoona dhowr jeed loo xiray dambi laxiriira dilal iyo dhac sida ay sheegeen saraakiisha Booliska dowladda Faransiiska.
R/wasaaraha xukuumadda Paris ayaa sheegay in ay socdaan baaritaanno ku aaddan sababta weerarkan dhalisay islamarkaana uu amar ku bixiyay in xaalad feejignaan ah lageliyo ciidamada ammaanka, kumanaan askari oo dheeri ah ayaa loo daad gureeyay dhanka deegaannada xuduudaha dhaca si looga hortago suurtagalnimada weeraro hor leh.
Toogashadan ayaa imaanaysa waqti dibad baxyo rabshada wata ay gilgileen magaalooyinka waaweyn ee wadanka Faransiiska.